Aṅụ ahịhịa, Aluminium Foil Akwụkwọ, Dọwanu Mezie, Nyefee Paperboard - Fancyco
PLA bụ ụdị mbukota ihe ọmụma si na osisi. Ya nri nche dị elu karịa omenala plastic kọntaktị. Ot plastik iji mmetụta na-enweta mgbe ngwaahịa arụmọrụ, 100% ere ure na-agbahapụ. Ma ọ na-eji maka extrusion ịkpụzi fụọ film, polylactic acid resin nwere ike ịbụ zuru okè. Nke a abụghị nnọọ a ihe onwunwe mgbanwe, na-enye ọrụ a mma ahụmahụ nke ngwaahịa, ọ bụghị nanị na machining usoro maka ala umu anwuru. Mgbe hapụrụ n'otu oge, nakwa ntị iji chebe gburugburu ebe obibi.
Anyị nwere a na nso nke ahụmahụ na mbupụ nke ngwaọrụ maka sịga, gụnyere Aluminium foil akwụkwọ, Acetate eriri, BOPP film, nkwụnye wrapping akwụkwọ maka nyo mkpanaka, Siga wrapping akwụkwọ, Inner etiti osisi maka sịga mbukota, Dọwanu teepu, na Inye ego mmiri oyi akwụkwọ.
Nsogbu na plastic: 1.6 straws kwa onye kwa dayAmericans iji iji kechie gburugburu ụwa 2,5 ugboro mgbe ụbọchị. Ọtụtụ n'ime ha bụ plastik straws.Ecosystem PollutionBecause ha na na na otú fechaa, straws ịfụ n'ime mmiri ụzọ, ebe ha gaba ka oké osimiri na-emerụ wildlife.Not Recyclable Non-biodegradablePlastic straws ike ike itighachi. Ha adịghị amalite irekasị na ha merụọ anyị na ala na anyị oceans.It bụ TIME TO Eco! Anyị na-pụrụ iche na ere ure diposables, gụnyere okpete bagasse tablewares, wheet ahịhịa nri containers dị ka cup, okpokoro akịrịkọ, efere, tree, efere na na na ọzọ disposable ihe eji na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, mkpapụ ntụrụndụ na ndị ọzọ.
Fancyco a hụrụ na 2004. Anyị ụlọ ọrụ ghọrọ a ọlaedo soplaya na Alibaba karịrị afọ 14. Ọ bụ a dị ịrịba ama mgbanwe na 2005 nke anyị nwere onwe anyị factory. Na 2015 Fancyco ọma banyere Nigeria na Uganda ahịa na melite No.1 ika nke ihennyapade akwụkwọ na ọcha na ngwaahịa na ná mba ndị a. Ugbu a, anyị na-pụrụ iche na mbukota na-ebi akwụkwọ ihe.